လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများအားလေ့လာခြင်းသည်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများ၊ နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်များကိုအသိပေးသည်။ အရည်အသွေးစစ်တမ်း (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
ချားလ်စ်, P. နှင့် Meyrick, ဂျေ (2018)
ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ ISSN 1359-1053
သုတေသနလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်း (SEM) မှထိတွေ့မှုလူပျိုများယုံကြည်မှုများ, စိတ်နေသဘောထားနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းသုတေသနဒီဖြစ်ပျက်ပုံကိုကို examine မူကြောင်းကိုအကြံပြုထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဒီထွန်းသစ်စပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်သက်ရောက်မှုတွေကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်နုပျိုယောက်ျားအပေါ် SEM မှထိတွေ့မှု၏ Self-အစီရင်ခံသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အကြားရှိယောက်ျားလေးများပါဝင်သော 'နှင်းကျနေသော' နမူနာကိုအလုပ်ခွင်တစ်ခုတွင်စုဆောင်းခဲ့သည်။ ဖိတ်ကြားခံရသူ ၄၀ အနက် ၁၁ ဦး ကအရည်အသွေးစစ်တမ်းကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။ စစ်တမ်းအချက်အလက်များကို Thematic Analysis အား အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဒေတာမှပေါ်ထွက်လာသောအဓိကအကြောင်းအရာများမှာ - အစွန်းရောက်သောအကြောင်းအရာများပိုမိုများပြားလာခြင်းအပါအ ၀ င် SEM ရရှိမှုအဆင့်များ (နေရာတိုင်းကိုသင်ကြည့်ရှုလော့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်းကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာလူပျိုတို့မြင်ထားတဲ့ (ဆိုးကျိုးများ - အဲဒါမကောင်းဘူး) ။ ဒေတာများကို (စိတ်ရှုပ်အမြင်များအကြံပြုရီးရဲလ်ကျမ်းပိုဒ် Fantasy) ကျန်းမာလိင်အသက်တာ၏လူပျိုတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ဝှမ်း (ကျန်းမာတဲ့လိင်ဘဝ) ။ မိသားစုသို့မဟုတ်လိင်ပညာရေး (အချို့ '' ကာကွယ်စောင့်ရှောက် '' ပူဇော်စေခြင်းငှါBuffer) လူငယ်များ SEM ထဲမှာမြင်ရတဲ့ပြဿနာစံချိန်စံညွှန်းမှ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို USA မှနောက်ဆုံးလူဦးရေအဆင့်ကိုအခြေပြုသုတေသနကြောင်းအမျိုးသမီးများ 2018% နှင့်များအတွက်အဓိကဘဝ-သင်တန်းအကျိုးဆက်များရှိသည်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၏ 81% အစီရင်ခံစာအတှေ့အကွုံ (Kearl, 43), ပြသနေတဲ့အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာ (Towl, 2018) ဖြစ်ပါသည် သားကောင်များနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Quadara, El-Murr နှင့် Latham, 2017) မှတွေ့ရှိချက်များအရ“ အရှိဆုံး၊ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်လက်လှမ်းမီနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်လိင်၊ ကျား၊ မ၊ နက်ရှိုင်းစွာပြproblemနာ "။
ညစ်ညမ်းနှင့်အပြုအမူ (ပေတရုနှင့် Valkenburg, 20) ၏စားသုံးမှုအကြားလင့်များန်းကျင်သုတေသန 2016 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်နှစ်ဦးစလုံးလိင်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုပြသနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဖို့စပ်လျဉ်းသူတို့ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တွေ့ရှိခဲ့
N ကို = 2018 ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲကလူတစ်ဦးသြစတြေးလျလေ့လာမှု (Davis က, Carrotte, Hellard နှင့် Lim က 517) ညစ်ညမ်းအတွက်အပြုအမူတွေငယ်ရွယ်လိင်ကွဲပရိသတ်တွေမြင်ခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်သောလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကျူးလွန်သောလုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်သုတေသန၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (Wright et al, 2016) သည်လေ့လာမှုများတွင်သက်သေအထောက်အထားကောင်းများတွေ့ရပြီးအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာသည်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရရှိမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနပြneedsနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည် (Davis, 2018) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မကြုံစဖူးနည်းလမ်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိနယ်နိမိတ်များကိုဖြတ်ကျော်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြုမှုကသက်သေပြနေသည်။ (Peter & Valkenburg, 2016)
ကဏ္sectionများအလိုက်လေ့လာမှုများအရ SEM ကိုလေ့လာခြင်းမှလူငယ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုလေ့လာရန်အကြံပြုကြသည်။ Kormas, Konstantoulaki, Constantopoulos & Kafetzis, 2006) ။ Peter & Valkenburg, (၂၀၁၀) တွင် SEM ထိတွေ့မှုမကြာခဏတွေ့ရှိရခြင်းသည်၎င်းသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ (လူမှုရေးသရုပ်မှန်) နှင့်လိင် (အသုံးအဆောင်) နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အတွက်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်ဆင်တူသည်ဟုယုံကြည်မှုများတိုးပွားစေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်ဤဆက်စပ်မှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိယန္တရားများကိုဖြိုခွင်းရန်အရည်အသွေးရှိသောအလုပ်များမှာအကန့်အသတ်ရှိသည် (Peter and Valkenburg, 2016. Löfgren-Mårtenson & Mansson, (2010)၊ လူငယ်များသာလျှင် SEM ၏လက်တွေ့မကျသောသဘောသဘာဝကိုအသိအမှတ်ပြုကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသင်ကြားပို့ချရန် ရည်ရွယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသုံးစွဲပြီးနောက်၎င်းကိုတုပရန်ဖိအားရှိသည်ဟုခံစားရသည် (Rothman et al 2015) ။ အားနည်းချက်မှာ US ရှိငယ်ရွယ်သော BME MSM မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့်အချက်အလက်များအရသရုပ်ဖော်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် (Arrington-Sanders et al 2015) သင့်လျော်သောလိင်ပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီမှု။
ဤသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM ထိတွေ့လိင်ယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှတဆင့်လူပျို၏အလေ့အကျင့်ပေါ်မှာရှိပြီးသောဖြန်ဖြေအချက်များစူးစမ်းဖို့စတင်ထို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
SEM ကိုလေ့လာရန်အရည်အသွေးစစ်တမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပါ ၀ င်သူများ၏အမည်ဝှက်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်တုန့်ပြန်မှုများတွင်လူမှုရေးအရလိုလားမှုကိုလျှော့ချရန်အမည်မသိအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာသည် SEM ၏အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများကိုရှင်းပြရန်သင်တန်းသားများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှုရင်းမြစ်များ၊ လိင်ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာသောလိင်ဘ ၀ နှင့်ပတ်သက်သောအမြင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အဓိကသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူနေစဉ်ရှာဖွေတူးဖော်ရန်ရည်ရွယ်သည့်မေးခွန်းများ။
လူငယ်များကိုအဓိကထားသောအလုပ်ခွင် (ခေါ်ဆိုမှုစင်တာ) ကိုအသုံးပြုပြီးနမူနာနည်းဗျူဟာသည်မကြာသေးမီက SEM ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွေ့အကြုံကိုထင်ဟပ်နိုင်သော်လည်းအစောပိုင်းလူကြီးများအတွင်းလိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းသတင်းပို့သူလူငယ်များကိုစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ snowballing အဆက်အသွယ်များကစုဆောင်းခံခဲ့ရသည်နှင့်နမူနာမျှဝတ္ထုသတင်းအချက်အလက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့်မှာအမှတ်ဆက်လက်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၂၅ နှစ်အကြားရှိယောက်ျားလေး ၄၀ ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတက်ရောက်သူ ၁၁ ဦး ကစစ်တမ်းကိုပြီးစီးခဲ့သည် (နောက်ဆက်တွဲကကိုကြည့်ပါ) ။
သင်တန်းသားများကိုအမည်မသိအရည်အသွေးအရည်အသွေးစစ်တမ်း၏ hard copy (အမည်မသိစာအိတ်မှတဆင့်ပြန်လာသော) သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဗားရှင်း (အီးမေးလ်ကနေပြန်လာ) ဖြစ်စေပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း inductive အကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (Braun & Clarke, 2006) မှအဆင့်ခြောက်ဆင့်ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဓိကအကြောင်းအရာများရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုမီကန ဦး ကုဒ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အချက်အလက်များ၏ semantic တန်ဖိုးကိုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ B တွင်အချက်အလက်များမှစာရင်းစစ်ဆေးခြင်း coding ဇယား၏ကောက်နုတ်ချက်နှင့်အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများနှင့်ခေါင်းစဉ်များ (နောက်ဆက်တွဲခ) မှတဆင့်အခင်းအကျင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်း။ သုတေသီများနှင့်ကြီးကြပ်သူမှခေါင်းစဉ်များ၏အတည်ပြုချက် (Moyrick, 2006) ၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာထင်ဟပ်ဖော်ပြချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အခြေခံသည်။
အင်္ဂလန်အနောက်ဘက်ရှိကျန်းမာရေးနှင့်အသက်ပညာသိပ္ပံဘုတ်အဖွဲ့သည်ဤလေ့လာမှုအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ၁၉၆၄ ဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်နှင့်နောက်ပိုင်းပြင်ဆင်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်အညီကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အသိပေးအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ကိုလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီမှရရှိသည်။ အကျိုးစီးပွားပictိပက္ခ - အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခမရှိဟုစာရေးသူများကကြေငြာခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုအားလုံးအတူတူပင်အလုပ်ခွင်မှာအလုပ်လုပ် 11-18 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြား 25 အထီးပါဝင်သည်။ သူတို့ကအမည်မဖော်များအတွက်ကလောင်အမည်ပေးထားပါပြီ။
ဤအရည်အသွေးပြည့်မီသောစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အချက်အလက်များအတွင်းရှိအဓိကအကြောင်းအရာ ၆ ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံး၏ယုံကြည်မှုများ၊ နားလည်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ဤအကြောင်းအရာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ခေါင်းစဉ်များကိုတံဆိပ်ကပ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတင်ပြထားသည်“နေရာတိုင်းကိုသင်ကြည့်ရှုလော့","အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - ဒါမကောင်းဘူး","Buffer, လိင်ပညာရေးနှင့်မိသားစု","ရီးရဲလ်ကျမ်းပိုဒ် Fantasy"နှင့်"ကျန်းမာတဲ့လိင်ဘဝ“ ဒေတာမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းနေသောကျယ်ပြန့်သောအဖြစ်အပျက်ကိုသရုပ်ဖော်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောယန္တရားများကိုဖော်ပြရန်ခေါင်းစဉ်များကိုဤသီးခြားအစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဇယား ၁ တွင်လမ်းကြောင်း၏အဆင့်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်အဓိကအကြောင်းအရာများ (အပြာရောင်ဖြင့်) ရေးဆွဲထားပြီးသက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များကိုလည်းပြသသည်။
သင်တန်းသားများကိုပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်အပြုအမူကိုမြင်လျှင်, ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအားဖြင့် SEM ရဲ့ကြည့်ရှုဘို့လူမှုရေးလက်ခံမှုတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုသရုပ်ပြပုံရသည်။
ဒါကကြီးထွားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ထင်တယ်။ - ရော့စ်
ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တူချစ်သူအဖြစ်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ - Gaz
“ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ထဲကဓာတုပစ္စည်းတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းတွေ့လာတယ်။ - အယ်လ်လီ
၂။ ဆိုးကျိုးများ - မကောင်းသည်
သင်တန်းသားများကို SEM စားသုံးမှုကနေအလားအလာပြဿနာများအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါလိမ့်ပုံရသည်။
ကျားမအဆင့်ဆင့်၏အန္တရာယ်ရှိသောအတွေးအခေါ်များကိုပိုမိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်ဟုလည်းငါပြောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများသည်များသောအားဖြင့်လက်အောက်ခံခြင်းနှင့်ယောက်ျားများ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ရှိသည်။ အမျိုးသားများသည်များသောအားဖြင့်ထိန်းချုပ်သူများအဖြစ်နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ကျားမအဖြစ်ပုံဖော်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိထိခိုက်လွယ်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိဘိုးဘေးအုပ်စိုးမှုကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း၊ - Bob
“ လိင်ကိုအလွယ်တကူ ၀ ယ်ယူပြီးဝယ်ယူနိုင်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်လိင်။ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်သူတို့၏ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲစေခြင်း၊
ဒီအုပ်စု, SEM မှာပြထားတဲ့ကျား, မကျပုံစံကိုလည်းငယ်ရွယ်အထီးသူတို့ကိုယ်သူတို့ရိပ်မိသောလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သလိုပဲ။
အချို့ယောက်ျားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမလုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောယောက်ျားလေးများသည်ကြာရှည်စွာမနေနိုင်ပါ။ - ရစ်ချတ်
"Porn ကလူတစ်ယောက်လိုလုံလုံလောက်လောက်မခံစားနိုင်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မြင်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။ " - Tom
ဆွတဲ့အဆင့်မြင့်အဘို့ဤတိုးမြှင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုက 'စံ' 'အဖြစ်မှတ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့မှကိုက်ညီဖို့တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာပွင့်လင်းသောမိသားစု၏သဘောထားသည် SEM ၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပညာရေးတို့၏အန opportunity တရာယ်ရှိသောကျန်းမာရေးပြ'နာများနှင့်ညီညွတ်သောအရင်းအမြစ်များကိုပေးသည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဤသို့သောကြားခံ၏ယန္တရားသည်လူငယ်များအားအမှန်တကယ်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်လိင်အပြုအမူကိုခွဲခြားရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
SEM အချက်အလက်များ၏ '' ယုံကြည်စိတ်ချ '' ပညာရေးအရင်းအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်ပေမယ့်တက်ရောက်လာသူများကို '' စံချိန်စံညွှန်း '' အပေါ် SEM တစ် variable ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည်။
"ဒါကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္andာန်နဲ့တစ်စုံတစ် ဦး ဘယ်လိုကြည့်ရှုသင့်တယ်၊ လိင်ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ်ဆိုတာကိုကျနော့်အမြင်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်တယ်" - ဟယ်ရီ
SEM ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤအုပ်စုတွင် SEM သည်အမှန်တကယ်လိင်အပြုအမူကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိ / မရှိသိနားလည်မှုအဆင့်အမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။
ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောဘ ၀ မည်သို့ရှိနိုင်သည်ကိုသင်တန်းသားများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးသည်ဒေတာဆောင်ပုဒ်အတွင်းဘုံချည်ခဲ့ကြသည်။
ဆက်သွယ်မှု၊ ရိုးသားမှု၊ လေးစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတွယ်တာမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးသည်ကျန်းမာသောလိင်မှုဘ ၀ အကြောင်းကိုဖော်ပြထားသော်လည်း SEM ၏ဘုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများမဟုတ်ပါ။ ဤအုပ်စုမှလူငယ်များသည်ဤကွဲပြားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ရလဒ် SEM စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့် SEM နှင့်ပုံဖော်စေခြင်းငှါ၎င်းအချက်များ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုများအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပါအဝင်လူပျိုတို့၏အလေ့အကျင့်အကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အချို့သောအလားအလာလမ်းကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤလေ့လာမှု၏အလှူငွေလုလင်တို့သည်မိမိတို့အတွေ့အကြုံကိုအတွင်းအကာအကွယ်အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်သောအရာကို ပို. အရေးကြီးသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် SEM စားသုံးမှုနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ရှာဖွေစူးစမ်း၌တည်ရှိ၏။
SEM ၏စားသုံးမှုနှင့်လက်ခံမှုကိုကြီးထွားလာသည်ဟုသတင်းပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပျံ့နှံ့မှုလေ့လာမှုများကအတည်ပြုထားသည် (Mattebo et al 2013) ။ သင်တန်းသားများကိုအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဤအကြောင်းအရာကို desensitised ဖြစ်လာခဲ့သည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်သောတိုးလာမှုနှင့်အတူဒေတာများသည် SEM စားသုံးမှုကိုပုံမှန်သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်ခေတ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း (သို့) ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည် (Peter & Valkenburg, 2016) ။ ဤပြသနာရှိပါသလား။ ဤအုပ်စုတွင် SEM ၏တကယ့်စစ်မှန်သောအယူအဆဟုထင်မြင်ယူဆပါသလား။ အချို့သောလူငယ်များသည် SEM ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ။ Rothman et al, (၂၀၁၅) ကလူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို 'သင်ကြားရေးရည်ရွယ်ချက်များ' အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သုံးစွဲမှုနှင့်အလွန်အမင်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာများတိုးပွားလာခြင်းကရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသောမျှော်လင့်ချက်များသို့ ဦး တည်စေနိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် (Peter & Valkenburg, 2015)
သို့သော်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်အမင်း variable ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤလေ့လာမှုမှလူငယ်များသည် SEM ၏အပြုအမူများအပေါ်တွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲစိတ္တဇကြောင့်သာဖြစ်သည်။ လူငယ်များသည်ကျန်းမာသောလိင်ဘဝနှင့်သင့်လျော်သောယုံကြည်မှုများအပေါ်လူငယ်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောအမြင်များကိုဖော်ပြသည်။ အပြုအမူများ ဤနမူနာတွင် 'စစ်မှန်သော' SEM မည်သို့မည်ပုံရှိကြောင်းထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုကြိုတင်ရှိပြီးသားအားနည်းချက်များ (ဥပမာမိသားစုပြိုကွဲခြင်း) နှင့်အကာအကွယ်ပေးသော 'ကြားခံ' အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ပြproblemနာရှိသော SEM အသုံးပြုမှုကိုဖြန်ဖြေခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်။ မိသားစုပြိုကွဲမှုသည်ပိုမိုများပြားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာပေများတွင်လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Hielman, et al, 2014) နှင့်သုတေသန၏ကျယ်ပြန့်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအား“ အားနည်းသော၊ ပြtroublနာရှိသောမိသားစု၊ ဆက်ဆံရေး "(ပေတရု + Valkenburg, 2016) ။ အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်လျှော့ချရေးသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုများအတွက်ရည်ရွယ်သောကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်နိုင်သည်
အပြုသဘောဆောင်သည့်အနေဖြင့်လိင်နှင့်လိင်ပညာရေးတို့တွင်မိသားစု၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည်ပါဝင်သူများက SEM ၏ကိုယ်စားပြုမှုအချို့ကို 'ကာကွယ်မှု' သို့မဟုတ်ဟန်ချက်ညီစေရန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည်လက်ရှိလိင်ပညာရေး၌အားနည်းချက်များကိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးကြောင်းအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည် (Brown et al, 2009) ။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အချက်အလက်များသည်ယခင်ကချမှတ်ထားသည့်မိသားစုအခန်းကဏ္ model ပုံစံနှင့်ဆက်နွယ်သောအပြုအမူ၊ ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအတွက်မူလစောင့်ရှောက်သူများ၏သဘောထားနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ဟပ်ပုံရသည်။
လိင်ပညာရေး၏တန်ဖိုးကိုလက်ရှိစာပေများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် (Health of Health, 2013) နှင့်သင်တန်းသားများသည်သူတို့၏လိင်ပညာရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်မလုံလောက်သော်လည်းအထူးသဖြင့် SEM ကိစ္စကိုမဖော်ပြကြပါ။ ထို့ကြောင့်လူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသည့် 'ငါတို့အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့ပြီ' (Crabbe et al, 2011) ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များသည်သိပ္ပံနည်းကျအကဲဖြတ်မှုလိုအပ်သည်။
SEM အသုံးပြုမှုပြproblemနာနှင့်စပ်လျဉ်း။ အလုပ်မှမီးမောင်းထိုးပြသည့်အချက်များကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစာပေတွင်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်းစံနှုန်းများကို internalising နှင့်လက်ရှိအားနည်းချက် (သို့) ကြားခံများ၏လမ်းကြောင်းများသည်ပိုမိုကြီးမားသောအရေအတွက်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှအကျိုးရရှိလိမ့်မည်။ လိင်ပညာရေး၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသည့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးလုပ်ငန်းသည်ခိုင်မာသောအကဲဖြတ်မှုမှတစ်ဆင့်ခိုင်မာသောသက်သေအထောက်အထားအခြေခံတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုရွေးချယ်ရေးကော်မတီ (အောက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်၊ ၂၀၁၆) မှအကြံပြုချက်များအရလိင်ပညာရေးကိုကျောင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွင်မသင်မနေရဖြစ်စေရန်အစိုးရအနေဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးနေပါသည်။ သက်သေအထောက်အထားများပိုမိုစုဆောင်းခြင်းကို enable လုပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ရလဒ်အစီအမံများတလျှောက်တွင်အစီအစဉ်အသစ်များကိုသိပ္ပံနည်းကျအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အရည်အသွေးနှင့်ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်သောနမူနာတစ်ခု၏ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်အကြောင်းအရာများသည်နမူနာအရေအတွက်ဆိုင်ရာအတည်ပြုချက်မှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိလိမ့်မည်။ သင်တန်းသားများကိုလည်းအလုပ်ခွင်တစ်ခုရှိကျောင်းသား / သုတေသီမှတစ်ဆင့်အဆက်အသွယ်များနှင်းလျှောစီးခြင်းအားဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကွဲပြားမှုနည်းပါးနိုင်သည်။ ဤသည်မှာဆင်းရဲသောဒေသများနှင့်ပြproblemနာပါ ၀ င်သောပုဂိုလ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်သေပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ (Lorimer, McMillian, McDaid, Milne and Hunt, 2018) စစ်တမ်းမှမေးခွန်းများသည်အချို့သောခေါင်းစဉ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သာ။ ကြီးမြတ်ရှာဖွေရေး enabled ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်လွှဲပြောင်းနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဒေတာများမှအကြောင်းအရာများ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကိုသုတေသီများကသူတို့၏ဘဝအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုထူထောင်ခြင်း၊ တြိဂံပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အနက်ကိုအတည်ပြုရန်ကြီးကြပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အရည်အသွေးကိုတိကျခိုင်မာစွာတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည် (Meyrick, 2006) ။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပုံမှန်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောပစ္စည်းများပိုမိုရရှိခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်မှာလူငယ်များအနေဖြင့်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အခန်းကဏ္ofကိုနားလည်ရန်နှင့်အဆိပ်ဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ ဤလေ့လာစူးစမ်းလေ့လာမှုသည်အကြောင်းတရားလမ်းကြောင်းကိုအတူတကွစုစည်းပြီးလိင်ပညာရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အလားအလာရှိသောအခန်းကဏ္affကိုအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
Alexy, EM, Burgess, AW, & Prentky, RA (2009) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်သောကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားပြင်းထန်သောအပြုအမူပုံစံများအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများအသင်းဂျာနယ်, 14(6), 442-453 ။ Doi: 10.1177 / 1078390308327137 [Doi]
Arrington-Sanders R ကို, Harper ကို GW, မော်ဂန်တစ်ဦးက, Ogunbajo တစ်ဦးက, Trent M က, Fortenberry JD ။ (2015) လိင်တူချင်း-ဆွဲဆောင် Black ကဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 1; 44 (3): 597-608 ။
ဘရောင်း, ဂျေ, Keller, အက်စ်, & Stern ပာ, အက်စ် (2009) ။ လိင်၊ လိင်၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင် - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မီဒီယာ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသုတေသီ, 16 (4), 12-16 ။
Crabbe, အမ်နှင့် Corlett, ဃ (2011) ။ မညီမျှမှု Eroticising: နည်းပညာ, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လူငယ်များ [အွန်လိုင်း] ။ ခံစားရတဲ့နစ်နာမှု, Vol ။ 20, အမှတ် 1 ,: 11-15 ။ ရရှိနိုင်: <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=132445715718161;res=IELAPA
Davis က, AC, Carrotte, ER, Hellard, ME နှင့် Lim ကက MS, (2018) ။ အဘယျသို့အပြုအမူ Do Young ကလိင်ကွဲသြစတြေးလျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ကြသည်မဟုတ်လော တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာပါ။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်, Pp.1-10 ။
ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန။ (2013) အင်္ဂလန်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကမူဘောင်။ (2013) ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: DH ။
Häggström ‐ Nordin, အီး, Sandberg, ဂျေ, Hanson, U. , & Tydén, တီ (2006) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်ဆွီဒင်လူငယ်များ၏အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သိပ္ပံစကင်ဒီနေးဗီးယားဂျာနယ်၊ ၂၀ (၄)၊ ၃၈၆-၃၉၃ ။
Heilman, B, .; Hebert, L ကို .; နှင့်ပေါလု-ဂေရ, N. (2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ Make: ဘယ်လို Boy မုဒိမ်းအပ်အထိတိုးတက်ကြီးပွားပါသလား? ငါး IMAGES နိုင်ငံများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမျိုးသမီးများနေ့သုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ (ICRW) နှင့်ဝါရှင်တန်ဒီစီ: Promundo ။
ကျောင်းများတွင် Commons အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုကော်မတီအိမ် (2016) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ 2016-17 ၏တတိယအစီရင်ခံစာ။ https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmwomeq/91/91.pdf
Jones, LM, Mitchell, KJ, & Walsh, WA (2014) ။ ထိရောက်သောလူငယ်ကာကွယ်တားဆီးရေးပညာရေးကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - အင်တာနက်လုံခြုံမှုပညာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
Kearl, H ကို ,. (2018) ကို #metoo လှုပ်ရှားမှုနောက်ကွယ်မှာအဆိုပါအချက်အလက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် Assault အပေါ်တစ်ဦးကအမျိုးသားလေ့လာမှု။ လမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းရပ်တန့်။ http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/2018-National-Sexual-Harassment-and-Assault-Report.pdf
Löfgren-Mårtenson, L. , & Månsson, အက်စ် (2010) ။ တပ်မက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဘဝ - ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 47 (6), 568-579 ။
Lorimer, K. , McMillan, L. , McDaid, L. , Milne, D. , Russell, S. နှင့် Hunt, K. , (2018) ။ စကော့တလန်ရှိဆင်းရဲချို့တဲ့မှုမြင့်မားသောဒေသများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း - နားလည်မှုနှင့်အလေ့အထများတိုးတက်စေရန်စိန်ခေါ်မှုအနက်။ ကျန်းမာရေး & နေရာ, 50, pp.27-41 ။
Mattebo M, Tydén T, Häggström-Nordin E, Nilsson KW, Larsson M. (2013) ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိအထီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယောက်ျားလေးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု & အပြုအမူကလေးအထူးကု၏ဂျာနယ်။ 1; 34 (7): 460-8 ။
Meyrick, ဂျေ (2006) ။ ကောင်းသောအရည်အသွေးသုတေသနကဘာလဲ? ညှဉ်းဆဲခြင်းကို / အရည်အသွေးမြင့်မှုကိုစီရင်ရန်ပြည့်စုံချဉ်းကပ်မှုဆီသို့ဦးတည်တစ်ဦးကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 11 (5), 799-808 ။ Doi: 11 /5/ 799 ။
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်စဉ်များ - ရူပါရုံသည်ရူပဗေဒ၏အခန်းကဏ္ role ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 37 (3), 375-399 ။
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2016) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ - အနှစ် ၂၀ ကြာသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 20 (53-4), 5-509 ။ Doi: 531 / 10.1080
Quadara, တစ်ဦးက။ , el-Murr, အေနှင့် Latham, ဂျေ (2017) ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ခုကသက်သေအထောက်အထားစကင်။ မိသားစုလေ့လာရေးသြစတြေးလျ Institute မှ https://aifs.gov.au/publications/effects-pornography-children-and-young-people
Rothman, EF, Kaczmarsky, C တို့, Burke က, N. , Jansen, အီးနှင့် Baughman, အေ, (2015) ။ “ порမပါဘဲ…ယခုငါသိသောအရာဝတ္ထုတစ်ဝက်ကိုလည်းမသိ” - မြို့ပြ၊ ဝင်ငွေနည်းသူများ၊ လူမည်းများနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ်များအကြားတွင်အပြာစာပေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေးဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 52 (7), pp.736-746 ။
Towl, G. အ, (2018) ။ တက္ကသိုလ်များမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုဖြေရှင်းရန်။ စိတ်ပညာရှင်, 31, pp.36-39 ။
Tsitsika, အေ, Critselis, အီး, Kormas, G. အ, Konstantoulaki, အီး, Constantopoulos, အေ, & Kafetzis, D. (2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်း - ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သောအချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုသက်ရောက်မှုများကိုဘက်ပေါင်းစုံဆုတ်ယုတ်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ CyberPsychology & Behavior, 12 (5), 545-550
Wright, PJ, Tokunaga, RS နှင့် Kraus, အေ, (2015) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အထွေထွေလူဦးရေလေ့လာမှုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ပြုမူသောအမှု Meta-analysis သည်။ ဆက်သွယ်ရေး, 66 (1) ၏ဂျာနယ်, pp.183-205 ။
Qu ။ အမှတ်
မေးခွန်းလွှာ / တုံ့ပြန်ချက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း၏အဘယျ type ကိုသငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်မြင်ပြီလော (ဥပမာ။ စာမျက်နှာ 3, Music, ဗီဒီယိုများ, ဆော့ဖ porn, အပြင်းစား Porn) ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ကောင်းသောလိင် / လိင်ဘဝကိုသင်ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုအဘယ်အရာကထောက်ခံသနည်း။
သငျသညျ add သို့မဟုတ်သင်မေးမွနျးခဲ့သင့်တယ်ထင်လိုဘာမှရှိပါသလား? သင်ဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်ခံစားရကြောင်းဘာမှထပ်ထည့်ပေးပါ။
နောကျဆကျတှဲခ: themes များမှကိုးကား၏စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း - themes များ Sub themes များ၏စားပွဲ / ကျယ်ပြန့်မြေပုံကို coding ၏ထုတ်ယူ။
စာမျက်နှာ ၃၊ သူငယ်မဂ္ဂဇင်းများ (တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်အခွံမာသီး)
ရောင်းအား (ပွဲတော်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များ) pitching
ဆော့ဖ်ဝဲ & အမာခံ porn
ငါခက်ခဲ-Core ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမျိုးစုံ, ငါမြင်ပြီ
ကျွန်မမှန်မှန်လိင်တူချစ်သူများ၏ဗီဒီယိုများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်အမာခံလိင်ဖျော်ဖြေအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်ကိုယ်တော်အခြေခံပေါ်မှာ stripteases ဖျော်ဖြေရှုမြင်ကြသည်။ အခြားပစ္စည်းများကိုငါလိင်တူချစ်သူများ၏တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးသမီးမော်ဒယ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုပုံပါဝင်အသုံးပြုပါ။
ငါအဓိကအားဖြင့်ကျနော်အင်တာနက်ပေါ်မှာအခမဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေရယူကြောင်းအမာခံ porn မြင်ကြပြီ
လိင် '' ကိုထိပုတ်ပါအပေါ် '' ယခုအဖြစ် tinder တူသောအင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမြင့်တက် porn ကိုအသုံးပြုပြီးလူများ၏အရေအတွက်လျော့ကျဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
ရုပ်ရှင်ငါ porn အဖြစ်မဟုတ်လူတန်းစားဤသို့ပြုပေမယ့်။
အနုပညာ (ကျနော်ကလေးတစ်ဦးအခါသူမ၏ပန်းချီကားများအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်၌ချိတ်ဆွဲခဲ့ကြဒါငါ့အမိ, အတော်လေးကြီးမားတဲ့ "ဝတ်လစ်စလစ်" အဆင့်ရှောက်သွားလေ၏)